Ime ulo oru | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Nye ndụmọdụ dị mma maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ! 7
Nye nkata kacha mma maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ! Ngwongwo 7 ruo mgbe ebighi ebi, zụrụ ma chefuo! Ị chọrọ bọlbụ ọkụ? Stool iji nyere gị aka! N'ihi na ọrụ ọrụ nchịkwa nkịtị dịchaghị ezughị oke. Kedu ụdị ngwá ụlọ (kitchen-bedroom-elite-economy ???) Kedu ihe dị ukwuu ...
N'ime akwụkwọ mpịakọta ahụ enwere mpempe akwụkwọ "Nkwupụta maka teknụzụ maka ogbugbu ọrụ", ebe ị ga - ahụ ihe atụ nke emechara
Na akwụkwọ mpịakọta ahụ enwere mpempe akwụkwọ "Nkwupụta maka teknụzụ maka ọrụ," ebe ị ga - ahụ ihe atụ nke emezuru. Ọtụtụ mgbe, mpempe akwụkwọ a bụ akwụkwọ akụkọ. Ahịa maara ihe ha chọrọ na n'ozuzu ...
Kedu ihe ndị na-adịghị mma?
Kedu ihe ndị na-adịghị mma? Ahịa ego, ọhụrụ ma jiri. ihe ndị siri ike ime ngwa ngwa. Ngwongwo Illiquid, ugbua na-ejighi ya na ihe a na-achoghi achoputa n'akwukwo ihe ndi ozo nke sitere na ndi ogbenye na-eme atụmatụ ma na-abawanye uru n'oru ...
Mee ka ụlọ ọrụ gị nwee ike ide ihe gbasara oru sayensị.
Mee ka ụlọ ọrụ gị nwee ike ide ihe gbasara oru sayensị. Ọnọdụ nke ịmepụta azụmahịa (ụlọ ọrụ) 1 ọhụụ echiche + onye na-achọpụta ọrụ nke ọrụ azụmahịa ngwa ngwa maka ọrụ azụmahịa 2 ogbo nke mmepe nke oru (atụmatụ azụmahịa) ...
kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti nkwado na nkwenye? Nyere ezi ndị mmadụ aka !!!
kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti nkwado na nkwenye? Nyere ezi ndị mmadụ aka !!! Echere m na: nkwenye bụ ule (ihe dịka ọmụmaatụ, diski mgbe ọkụ), nkwenye bụ ihe gbasara ịbanye ndebanye, ...
Ebee ka osisi APPLE na mmadụ ole dị? Enweghị m atụ anya nke a, ma ọ bịara bụrụ ihe nzuzo nzuzo.
Ebee ka osisi APPLE na mmadụ ole dị? Enweghị m atụ anya nke a, ma ọ bịara bụrụ ihe nzuzo nzuzo. Apple nwere ụlọ nke ya na Taiwan, China, Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand, Czech Republic na ...
Gịnị bụ ego ejidere? Ego ejighachiri - ihe ngosipụta nke ọnọdụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego, nke njikwa ejiri maka mkpebi na iwu etiti. Itule mpempe akwụkwọ - ngụkọta ọnụ ahịa nke ụlọ ọrụ natara maka ụfọdụ…
Biko gwa m na asụsụ dị mfe, olee ihe bụ isi ọrụ? Na nkenke, ma nke ahụ n'ozuzu ya doro anya.
Biko gwa m na asụsụ dị mfe, olee ihe bụ isi ọrụ? Na nkenke, ma nke ahụ n'ozuzu ya doro anya. Gwa ndị na-arụ ọrụ na usoro ụdị ọrụ a, ka ha nwere ahụmahụ? weputa ugwo nke oge ...
Kedu ụgwọ dị na ụlọ ọrụ gas?
Gịnị bụ ụgwọ ọnwa na Gazprom? Spetsialist5 25 000 R50 000 34 000 P P Main spetsialist3 65 000 R100 000 81 100 P P ọrụ OOU2 35 000 60 R000 P ...
Kedu onye agha ahụ pụtara n'ihu? MTS Beeline ma ọ bụ Megafon?
Kedu onye agha ahụ pụtara n'ihu? MTS Beeline ma ọ bụ Megafon? KyivStar yiri m na MTS na-achọ ebe ọ nọ. Na mpaghara nke Krasnodar: mts, beeline, megaphone, ma na mpaghara dị iche iche nke ya ...
onye bụ sistema ekwentị kọntaktị ???
onye bụ sistema ekwentị kọntaktị ??? S-TELL Emeputa Taiwan China ezigbo ụdị bụ ihe atụ M477 M571 Eleghi anya China !!!! Mbụ banyere ụdị aha S-TELL. N'ezie, dị ka onye na-emepụta ihe, ọ dịghị adị. E nwere ...
Egwu osisi! Kedu ihe a ga-eme site na sawdust na ájá na obere njikọ? N'ezie.
Egwu osisi! Kedu ihe a ga-eme site na sawdust na ájá na obere njikọ? N'ezie. eme ka ụlọ mgbochi nke sawdust + ngwa ngwa na ihe nkedo maka ịkụ ọbụna igwe ọkụ ọkụ ọkụ nwere ike iwe ọkụ, a ka nwere ụdị ntinye, ...
Nnukwu Nnụnụ na-aghọ aghụghọ ma ọ bụ na ọ bụghị?
Nnukwu Nnụnụ na-aghọ aghụghọ ma ọ bụ na ọ bụghị? Nke a abụghị ịghọ aghụghọ ule, mana iji nweta ego ị chọrọ ndị nnochite anya ga-atụfu ego, ị ga-enweta pasent mgbe i tinyechara otu puku mmadụ n'ebe ahụ. Na ...
Kedu onye nwere ụlọ ahịa Store Pyaterochka? zụrụ ha
Ownnye nwere ngwongwo Pyaterochka? Ezuru ha na anyị nwere "Pyaterochka ka a na - akpọzi" yingzụ "" Ah ha! Ha weputara onwe ha dika ndi nchikota ..! Lee ka o si dị mfe ..))) Sobchak agadi nwere Onwe M Ruo m maara, netwọkụ a ...
Kọwaara onye nzuzu, gịnị bụ ahịa ala? Ụlọ ọrụ ndị a enweghi ike ịzụta?
Kọwaara onye nzuzu, gịnị bụ ahịa ala? Ụlọ ọrụ ndị a enweghi ike ịzụta? Nke a bụ kpọmkwem mgbe steeti obodo si n'aka ndị ahịa zụrụ ego ụtụ isi n'aka anyị. =) ...
ihe nke ígwè ígwè
ihe ígwè ígwè ígwè !!!! Ọ gbazere ígwè. BALBES. ígwè)) dct negst; tktpyfz helf bpgjkmpetncz d jpzqcndt yfghbvth dtlhj! IRON !!! ígwè, ígwè, ọla kọpa, aluminum, zinc, lead, silver, gold ...
ego ego. kedu mmetụta nke ego ego?
ego ego. kedu mmetụta nke ego ego? Ego leverage (leverage, leverage, leverage, ego leverage) bụ ruru nke nha nha nha nha nha anya (na okwu ndị ọzọ, ndị ruru n'etiti ...
Kedu ihe bụ ntọghata?
Kedu ihe bụ ntọghata? Ngbanwe (site na nsụgharị Latin conversation, mgbanwe, mgbanwe): Nchigharị na teknụzụ na-emepụta kemịkal, usoro nhazi gasesị iji gbanwee ihe mejupụtara nke ngwakọta gas gwakọtara; Ntụgharị na ahịa Ịntanetị bụ ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa ...
site na njirimara ndị dị ntakịrị, ụlọ ọrụ na obere ụlọ
na njirimara ndị akọwapụtara site na obere, ọkara na nnukwu ụlọ ọrụ dịka nnukwu ego nke ụlọ ọrụ ahụ! Ma echela .. ọnụnọ ha n'ahịa ahịa! A ka nwere uzo ikpo okwu! microenterprises - ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ...
Mmekọrịta zuru oke na mmekọrịta na okwukwe, ihe atụ nke ụlọ ọrụ dị otú ahụ
Mmekorita zuru oke na nmekorita nke okwukwe, ihe omuma nke ndi ulo oru ndi a enweghi ugbua udiri inyocha iwu ndi a) buru ndi ochie i mehiere: ihe dika ulo nile bu ndi ntinye-iwu ().
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 1,765.